တကျစီစီးရငျး iPhone မကေ့နျြခဲ့တာကွောငျ့ လာရောငျးရငျမဝယျကွဖို့ တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ ခမျြးခမျြး – Askstyle
တကျစီစီးရငျး iPhone မကေ့နျြခဲ့တာကွောငျ့ လာရောငျးရငျမဝယျကွဖို့ တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ ခမျြးခမျြး
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ချမ်းချမ်းကတော့ မနေ့ကသမီးလေးကို ကျောင်းသွားကြိုပြီး သူ့ရဲ့အလုပ်ဖုန်းလေး တက်စီပေါ်မှာကျန်ခဲ့ကြောင်းကို သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တာပါ။ “ကျွန်မရဲ့ iPhone 6s လေးတက်စီပေါ်ပါသွားလို့ပါ.. ဒီနေ့ သမီးလေးကျောင်း ES4Eကို သန်လျင်ကနေသွားကြိုပြီး ykko မှာထမင်းကျွေးဖို့ ဆင်းလိုက်တာဖုန်းပါသွားလို့.. Taxi သမားက အသက်ကြီးပါပြီ.. အဘအရွယ်ပါ.. ကျွန်မထင်တာတော့ နောက်ထပ်တက်စီဌားစီးတဲ့သူရသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်” လို့ရေးသားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် ချမ်းချမ်းကတော့ သူ့ဖုန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေပါသွားကြောင်းကို “ဖုန်းကလည်း ကွဲနေပါပြီ.. ရောင်းစားလည်းတန်ဖိုးမရှိပါဘူး… ကျွန်မစပ်ထားတဲ့သီချင်းလေးတွေပါသွားလို့ပါ.. ကျေးဇူးပြုပြီး ဖုန်းဆိုင်တွေမှာ iPhone 6s အကွဲလေး lock လာဖွင့်ရင် ဖုန်းဆိုင်တွေမလုပ်ပေးကြပါနဲ့နော်.. လာရောင်းရင်မဝယ်ကြပါနဲ့.. iPhone ငွေရောင်လေးပါ.. အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်ဖုန်းတွေပါသွားလို့” လို့ဆိုပြီး တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
ချမ်းချမ်းကတော့ မယ်လိုဒီဝေါသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတစ်ဆင့် ဂီတခရီးလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းလာတာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေဆက်တိုက်သီဆိုနေရသူပါ။ဒါ့အပြင် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သမီးလေး မြမိုးဂဂါင်္နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မနေ့ကတော့ သမီးလေးကျောင်းကြိုအပြန်မှာ သူ့ရဲ့အလုပ်ဖုန်းကားပေါ်ကျန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းချမ်းရေးစပ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေအပြင် အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဖုန်းတွေပါ ပါသွားတာမို့ ပရိသတ်ကြီးမြန်မြန်ပြန်ရနိုင်အောင် မျှဝေပေးကြပါဦးနော်..
နိုငျငံကြျောအဆိုတျောခမျြးခမျြးကတော့ မနကေ့သမီးလေးကို ကြောငျးသှားကွိုပွီး သူ့ရဲ့အလုပျဖုနျးလေး တကျစီပျေါမှာကနျြခဲ့ကွောငျးကို သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့တာပါ။ “ကြှနျမရဲ့ iPhone 6s လေးတကျစီပျေါပါသှားလို့ပါ.. ဒီနေ့ သမီးလေးကြောငျး ES4Eကို သနျလငျြကနသှေားကွိုပွီး ykko မှာထမငျးကြှေးဖို့ ဆငျးလိုကျတာဖုနျးပါသှားလို့.. Taxi သမားက အသကျကွီးပါပွီ.. အဘအရှယျပါ.. ကြှနျမထငျတာတော့ နောကျထပျတကျစီဌားစီးတဲ့သူရသှားတာဖွဈပါလိမျ့မယျ” လို့ရေးသားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပွငျ ခမျြးခမျြးကတော့ သူ့ဖုနျးလေးနဲ့ပတျသကျပွီး အရေးကွီးတဲ့အခကျြအလကျတှပေါသှားကွောငျးကို “ဖုနျးကလညျး ကှဲနပေါပွီ.. ရောငျးစားလညျးတနျဖိုးမရှိပါဘူး… ကြှနျမစပျထားတဲ့သီခငျြးလေးတှပေါသှားလို့ပါ.. ကြေးဇူးပွုပွီး ဖုနျးဆိုငျတှမှော iPhone 6s အကှဲလေး lock လာဖှငျ့ရငျ ဖုနျးဆိုငျတှမေလုပျပေးကွပါနဲ့နျော.. လာရောငျးရငျမဝယျကွပါနဲ့.. iPhone ငှရေောငျလေးပါ.. အရေးကွီးတဲ့ အလုပျဖုနျးတှပေါသှားလို့” လို့ဆိုပွီး တောငျးဆိုခဲ့တာပါ။
ခမျြးခမျြးကတော့ မယျလိုဒီဝေါသီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကနတေဈဆငျ့ ဂီတခရီးလမျးကိုလြှောကျလှမျးလာတာဖွဈပွီး အခုဆိုရငျ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့အဆိုတျောတဈယောကျအနနေဲ့ ဖြျောဖွပှေဲတှဆေကျတိုကျသီဆိုနရေသူပါ။ဒါ့အပွငျ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့သမီးလေး မွမိုးဂဂါင်ျနဲ့အတူ ပြျောရှငျဖှယျကောငျးတဲ့ ဘဝလေးကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး မနကေ့တော့ သမီးလေးကြောငျးကွိုအပွနျမှာ သူ့ရဲ့အလုပျဖုနျးကားပျေါကနျြခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ခမျြးခမျြးရေးစပျထားတဲ့ သီခငျြးတှအေပွငျ အရေးကွီးတဲ့အလုပျဖုနျးတှပေါ ပါသှားတာမို့ ပရိသတျကွီးမွနျမွနျပွနျရနိုငျအောငျ မြှဝပေေးကွပါဦးနျော..